Abathwali befashoni ye-Instagram Thatha umdlalo wabo wesitayile phezulu kwi-Notch
I-Ultra Haute! UkuJonga uMva ngokuJonga uSithandile kwiiCeles zase-Afrika nakwiiNkwenkwezi zeVeki ngeVeki ephelileyo
Kule veki iphelileyo, ezinye zeenkcenkce ezibalaseleyo kunye neenkwenkwezi zesitayile e-Afrika zaphuma kuluhlu lwamabala akhangelekayo athe, okwabelwana ngawo kwi-Instagram. Ubuntu beTV baseGhana UNana Adjoa Walker ubonise ulusu kwindawo yokutsala umzimba-ofanelwe bubomvu kwi-gown dress awayeyinxibele ngesipaji sepinki kunye neebhulukhwe ezipinki ezimdaka. Iifoto zezitayile ze-Instagram
Ngapha eNigeria, ebhiyozela ukutyunjwa kwakhe njengoMcebisi oKhethekileyo kwiRhuluneli ngenkcubeko nokhenketho, iNorlywood superstar Mna Edo, usinike umphathi we-chic ogqamileyo kwiibhulukhwe ezimibalabala. Uhlobo lwesichukumisi sesitayile Nimi Nwofor Ubuye wakhonza umphathi we-chic vibes kwi-pantsuit emhlophe emhlophe awayeyigqiba ngesigqoko esimphezulu sebhulowu.
Iblue Mbombo Uhlobo lwefashoni yempembelelo yefashoni Mna Edo Isitayile sefestile ye-Instagram Isitayile se-Instagram influencer Isitayile se-Instagram UJennifer Oseh UJudith Heard UJulitha Kabete UNana Adjoa Walker Nimi Nwofor Ogi Okonkwo USinokhule Booi Toke Makinwa
Uhlobo Rave Julayi 14, 2020